समाचार पत्र अनावश्यक आफूलाई मार्न जारी | Martech Zone
अखबारहरू अनावश्यक रूपमा आफूलाई मार्न जारी राख्छन्
सोमवार, जुन 9, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
रूथको ब्लगको माध्यमबाट, मैले भर्खरको न्यू योर्क टाइम्समा पढ्न सकें ट्रिब्यूनले उनीहरूको १२ ठूला अखबारहरूबाट 500०० पृष्ठहरू काट्ने योजना बनाइरहेको छ हरेक हप्ता।
अखबार = शौचालय कागज
मँ भन्न सक्दिन कि यसले मलाई कस्तो व्याकुल बनाउँछ र ... र, उपभोक्ताको रूपमा तपाईं पनि अत्यन्त निराश हुनुपर्दछ। यस्तो देखिन्छ कि अखबार उद्योगले यसको असीमित सिक्ने ज्ञानमा, अहिले शौचालय कागज उद्योगले पछ्याएको छ। उनीहरू आजकल धेरै पैसाको लागि कम पानाहरू बेच्दैछन्।
समस्या यो छ कि मानिसका शौचालय बानीहरू परिवर्तन भएका छैनन्, तर तिनीहरूको पढ्ने बानी छ। शौचालय कागज कम्पनीहरूले उही मूल्यको लागि संकुचन रोलको साथ भाग्न सक्दछन् - हामीले अझ पनि ती किन्नु आवश्यक छ। अखबारका लागि होईन।
तपाईंको उत्पादको गुणवत्ता कम गर्न आवश्यक छैन
१ 15 बर्ष अघि मैले भर्जिनियन-पाइलटको लागि काम गरें र हामीले गतिशील ईन्सर्सन उपकरणका साथै केही जटिल प्रिन्टि press प्रेस लेआउटको विश्लेषण पनि गर्‍यौं। टेक्नोलोजीले त्यतिखेर गतिशील रूपमा एउटा अखबार बनाउनको लागि पर्याप्त इनामदायी बनाएको थिएन न त यो एक टेक्नोलोजीले घरेलू लक्षित अखबार बनाउने प्रस्ताव गर्‍यो।
केही महिना पहिले, म आफ्नो ब्लगको साथ स्कट व्हिटलकलाई मद्दत गर्दै थिएँ र उनले मलाई उनको कम्पनीको भ्रमणमा लगे, फ्लेक्सवेयर इनोवेशन। उनले मलाई एक आकर्षक लेजर प्रिन्टि mechanism म्याकनिमेसन देखाए जुन उनीहरू विकास गर्दै थिए जुन अविश्वसनीय गति र सहिष्णुता थियो, प्रिन्टिंग प्रेस वा सम्मिलन मेसिनको विपरीत।
परिवारको विशिष्ट प्रतिलिपि सिर्जना गर्नु समाचार पत्रहरूका लागि वरदान हुनसक्दछ किनकि तिनीहरूले त्यसपछि व्यक्तिहरूको छनौटमा आधारित घरेलू-विशिष्ट लक्ष्यीकरण प्रस्ताव गर्न सक्दछन्। अर्को शब्दहरुमा, कम विज्ञापनहरु = अधिक राजस्व। एक उत्तम खरीदले आधा मा यसको वितरण कटौती गर्न सक्छ तर प्रविधि सेक्सन मनपराउने हरेक घर मा हिट्न सक्छ। के उनीहरू आफ्नो वितरण र कागज लागत cut०% कटौती गर्न इच्छुक छन् तर लक्षितका लागि अतिरिक्त १०% तिर्ने छन्? ओह ... हो ... यसले तिनीहरूलाई लाखौं बचत हुनेछ!
उल्लेख नगर्नु जुन यसले संयुक्त राज्य अमेरिका हुलाक सेवाको साथ प्रतिस्पर्धा गर्ने अखबारहरूमा पनि पुर्‍याउन सक्छ।
म कल्पना गर्न सक्दिन कि यो दिन र उमेर, यो तपाईको सेक्सन प्रिन्ट गर्न र घरको अनुरोधको आधारमा गतिशील रूपमा एउटा समाचार पत्र उत्पन्न गर्न सम्भव छैन। सोच्नुहोस् कि तपाईंको अखबारबाट हजारौं पृष्ठहरू काट्न कत्ति सजिलो हुनेछ यदि तपाईंसँग रुचि नभएको खण्डहरू छैनन् भने! यदि म खेल वा संपादकीय पृष्ठको विचारमा छुइनँ भने, तिनीहरूलाई काट्नुहोस्!
साथै, क्यारियर क्रमबद्ध र वितरणले समाचार पत्र हरेक ढोकामा झन् बढी सटीक हुने निश्चित गर्दछ! एउटा वाहकले केहि राउटि table टेबुलमा हेर्नु आवश्यक पर्दैन, तिनीहरूले केवल अर्को अखबार बाहिर तान्न र मिल्दो ढोकामा टास गर्छन्।
यसको साथ समस्या, पक्कै पनि यो हो कि यो त्यस्तो छैन सजिलो केवल पृष्ठहरूको गुच्छा र मूल्यवान कर्मीहरू अनुसरण गरेर। यसको लागि प्रक्रियामा परिवर्तन र आवश्यक मुद्रण र वितरण उपकरणहरूमा महत्त्वपूर्ण लगानी आवश्यक छ, सयौं लाखौं डलर। त्यो एक 40% मार्जिन धेरै गहिरो मा काट्छ।
साम जेलको सन्देश स्पष्ट छ - उसलाई परिवर्तन गर्न वा फिर्ती गर्ने उद्योगमा विश्वास छैन। शेयरधारकहरुलाई नोट - यसलाई फाल्नुहोस्।
टैग: a2फेसबुक रणनीतिस्टिलहाउससिंक
WordPress: विज्ञापन-मन्त्रीको साथ विज्ञापन प्रबन्ध गर्नुहोस्
किन टाइपपेड वर्डप्रेस एन्टी-स्प्याम प्लगइन बनायो?